Antoko Marina: “Azo atao ny manohitra noho ny tsy fitovian-kevitra” | NewsMada
Antoko Marina: “Azo atao ny manohitra noho ny tsy fitovian-kevitra”
“Na tsy mbola tanterahin’ny mpitondra fanjakana aza ny fandaharanasany, efa azo atao sahady ny hoe tsy mitovy hevitra aminy. Izay ny atao hoe demokrasia.” Io ny fanehoan-kevitry ny mpandrindra ny antoko Marina, Ranaivoson Désiré, momba ny mbola tsy fijoroan’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao.
Noraisiny ho ohatra ny hoe fivarotana tany amin’ny vahiny na tsia. Raha miteny ny fitondram-panjakana ka mandrara ny fivarotana tany amin’ny vahiny amin’izao fotoana izao, misy indray ny miteny hoe mety ny fivarotana tany amin’ny vahiny fa tsy misy mpampiasa vola ho avy. Endrika adihevitra izay: demokrasia.
Nanao fampanantenana ny fitondrana nandritra ny fampielezan-kevitra. Miteraka vina sy iraka izay fampanantenana nataony izay. Tokony hisy fandaharanasa izany iraka ataony izany. Izay ilay Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) sy izay fomba hanatanterahana azy, araka ny fanazavany. Izay fandaharanasa izay no mivadika asa fa tsy mijanona fotsiny hoe mahomby rehefa mahavita asa. Inona ny fiantraikany raha misy asa vita?
Mila miantraika amin’ny vahoaka ny asa
“Mahazo manao asa be dia be ny tena fa tsy misy fiantraikany”, hoy izy. Mila refesina izay. Afa-mandrefy koa ny vahoaka: raha nanao asa ny fanjakana, tsapany ve fa niantraika any aminy izany? Izay ny anisan’ny nanahirana tamin’ny fitondrana teo aloha: nanao asa be dia be izy nefa tsy nisy zavatra tsapan’ny olona firy. Ny niafarany, ireny ny vokany…
Lesona izany. Na manao asa toy inona aza ny tena, nefa tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka sy tsy tsapan’ny olona: mitovy amin’ny tsy miasa ihany. Mila hitan’ny olona ny vokatry ny asa ataon’ny tena.
Mbola mangina sy tsy mihetsika ny mpanao politika
Tsy mbola andrenesam-peo sy tsy mihetsika firy ny mpanao politika na ny mpanohitra amin’izao toe-draharaham-pirenena izao. Miandry ny asa sy ny fomba fiasan’ny mpitondra fanjakana? Na mbola miandry aloha… Amin’izany, tsy fantapantatra be ihany na miandry zava-bita tokoa sa miandry toerana. Nefa na tsy mbola misy asa vita aza, araka ny fijerin’io mpanao politika io: mahazo manohitra raha ilaina izany.